PwintsSan – Page 143
မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ့ကာသလိုပဲ။ အခုအချိန်မှာ သူအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ …” မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၏ဇနီး ဒေါ်ဆက်မီလွင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
April 6, 2018 twl 0
မေး – အစ်မနဲ့ဆရာတို့ ဖူးစာဆုံဖြစ်ခဲ့ပုံကို အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ။ ဖြေ – အစ်မအဖေဆုံးပြီးတော့ အစ်မစိတ်ဓာတ် အရမ်းကျနေတဲ့အချိန်မှာ အစ်မအမေက သူ့ကိုကိုးကွယ်တော့ အဖေ့အတွက် ဆွမ်းကပ်ဖို့ကိစ္စစီစဉ်ရင်းနဲ့ စသိကြတာ။ နောက်တော့ သူက စာရေးဆရာဆိုတော့ ကုန်ကြမ်းလိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အစ်မ ဂျာမနီမှာနေခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ သိချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ရေးပေးတယ်။ […]
တည်သီး ကို သုံးနှစ်အောက် ကလေးများ မကျွှေးသင့်ပါ ကလေးမိဘများ သိထားဖတ်ထားသင့်ပါတယ်
မြန်မာအခေါ်”တည်သီး”ကို ၃နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို လုံးဝမကျွေးသင့်ပါဘူး။ အဆင်မသင့်ရင် အသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်နို်င်တဲ့ သာဓကတွေကိုဘာသာပြန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။”တည်သီး”ဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက်အစာအိမ်မှာ ကျောက်တည်စေနိုင်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီချိန်တွင်စားသုံးမိပါက ကလေးငယ်မှအသက်ရှု မဝဖြစ်ကာ ကိုယ်ခံအားမကောင်းချိန်တွင် သတိမေ့မျှောခြင်း သတိပြန်မလည် လာသည် အထိ ဖြစ်စေ၍အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း သတိပေးရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ငယ်ရွှယ်တဲ့ ၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ရဲ့ အတွင်းကလီဇာ ခံနိုင်ရည်အားနှင့်ကလေး၏ […]
သွား ကိုက် ရောဂါများ… မည်သည့်နည်း နဲ့ ကိုက်ကိုက် ဘယ်လောက် ပဲ ကိုက်ကိုက် ( ၅ ) မိနစ် အတွင်း ပျောက်ကင်း သွားမည်
အသုံးဝင်ထိရောက်စေသော သွားကိုက်သွားနာဆေးနည်းတစ်လက်မှာ (၁) ကပ်စေးနှဲသီးများကို မီးဖြင့်ကျွမ်းအောင်လှော် (၂) အမှုန့်ထောင်းပြီး ဖန်ပုလင်းထဲထည့် (၃) ကိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သွားကို ဆေးမှုန့်သိပ် ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၄) သွားဘယ်လောက်ပဲ ကိုက်ကိုက် (၅) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားမည်ဟု ဆရာကြီးရန်ရှင်းကိုယ်တိုင် မှာလိုက်ကြောင်းဖေါ်ပြထားပါတယ်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ဟောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ သွားကိုက်ပျောက်ဆေးချီးမြှင့်ပေးသူက ဆရာကြီးရန်ရှင်း လို့ […]
ခေတ် သစ် လူ ယုတ် မာ မ ၂ ဦး
မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာ မြို့သစ် ရပ်က လူ့ ပြည်ရောက် ငရဲမ ၂ ဦး ၏ မြန်မာမ လေးအပေါ် ရက်စက်ယုတ်မာမှု အတွက် ဘယ်လို ပေးဆပ်မလဲ ? ၅၅ လမ်းမ အလယ်မှာ လူထုနည်းနဲ့ ခွေးကျွေး ခြင်းဟာ […]
သဘာဝကျတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုရရှိဖို့အတွက် လုံးဝပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့ အိချောပို
သဘာဝကျတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုရရှိဖို့အတွက် လုံးဝပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့ အိချောပို ပရိသတ်တွေတိုင်းချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အိချောပိုကတော့ သူမရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ရုပ်ရှင်ကားအသစ်တစ်ခုကို ရိုက်ကူးလို့နေပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အိချောပိုကို အရင်ကနဲ့မတူ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ ပုံစံအသစ်နဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ နာမည်ကတော့ “အကိတ်”လို့အမည်ရပြီး နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့နဲ့အတူ ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ […]
ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာအကြောင်းစုံကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ
လူကိုညှင်းဆဲတာထက်စိတ်ကိုညှင်းဆဲတာကပိုမိုရက်စက်သည် ဆရာက ပေးရတာကိုအင်မတန်ပျော်သူပါ မပေးရရင်အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲပါတယ် သူကဒါကိုသိတော့ ဝန်ထမ်းတွေကိုဆရာကစားစရာတွေကျွေးရင်အော်ဟစ်ရန်တွေ့ပါတယ် တားမြစ်ပါတယ် ပိုနေတဲ့မုန့်ကိုတောင်ကျွေးခွင့်မပြုပါဘူး တရားနည်းလမ်းမကျတဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမို့နားမထောင်ပါဘူး ရှိရင်ကျွေးတာပဲ ဆရာ့ကိုတားမရတော့ ဝန်းထမ်းအားလုံးကို ဆရာကျွေးတာစားရင် အလုပ်ကထုတ်မယ်လို့အမိန့်ထုတိပါတယ် အီဒီအချိန်ကစပြီး ဝန်ထမ်းတွေဟာဆရာကျွေးတာကိုမစားရဲကြတော့ပါဘူး ဆရာစာအုပ်တွေကဆရာ့လက်ထဲမှာရှိမှအများအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမှာပါ အများထဲမှာ မိသားစုလည်းပါပါတယ် သူ့ လက်ထဲမှာရှိရင်သူ့အတွက်မှတစ်ပါးဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး ဆရာကတရားမဟောတော့တဲ့အတွက် စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေရမှ ပရဟိတကိုဆက်လုပ်နိုင်မှာပါ ဆရာဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်၂အုပ်က၂၀၁၆ကတည်းကရေးပြီးနေတာပါ […]
အတ္တတစ်ခုက ဂူထဲမှာ ပိတ်သတ်လိုက်တဲ့ (၆) လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု
အတ္တတစ်ခုက သတ်လိုက်တဲ့ (၆) လောင်ပြိုင် လူသတ်မှုကြီး မီးဖိုဘေးကလူ ၆ ယောက် တစ်ခါက. . . တစ်နှစ်မှာ ၁၀ လလောက် ရေခဲနေတတ်တဲ့ တောမကျ မြို့မကျ ရွာလေးတစ်ခုမှာပေါ့ … ဆောင်းတွင်းရောက်လာတယ်။ နှင်းတွေကလည်းကျလိုက်တာ။ ရေခဲမှတ်အောက်ကို အနှုတ် ၃၀ ဒီဂရီလောက်ရောက်နေပြီ။ […]
ကြက်သားဟာ လူတိုင်းနီးပါး စားကြလို့ လူတိုင်း ဒါလေးကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
သက်သက်လွတ်စားတဲ့သူတွေကလွဲရင် အသားစားတဲ့သူတိုင်း ကြက်သားနဲ့ ကင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုကြားထဲကို ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းအရ 90%ခန့်သော သူတွေဟာ ကြက်သားကို ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ နားလည်နေကြပါတယ်။ ဗြိတိန်တစ်ခုတည်းမှာပင် နေ့စဉ် ကြက်သားစားတဲ့သူ ဦးရေ 2.2 သန်းအထိ ရှိပြီး၊ အများအားဖြင့်တော့ ကင်ခြင်း၊ ကြော် ခြင်း၊ […]
အံ့သြစရာတစ်ခု မထင်မှတ်ပဲ သိခဲ့ရတယ်။နို့ဆီကိုဘယ်ကရသလဲတဲ့။ မဆိုင်းမတွဖြေ လိုက်တယ် နွားနို့ကရတာပေါ့ လို့။ လုံးဝမဟုတ်ဘူးတဲ့။ စားအုန်းဆီကရတာတဲ့ ..။ ဟုတ်လို့လား …လို့အံ့သြတကြီးမေးလိုက်တယ်။ fill pounder နို့မှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းရန်အရည်အသွေးမမှီသောစားအုန်းဆီဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်း နို့ဆီချက် ရန် စားအုန်းဆီပေပါများကွန်တိန်နာဖြင့်လာချကြောင်း။ အန္တရာယ်ရှိ၍ မစားသုံးရန် နို့ဆီစက် ရုံတွင် အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ဦးကသူ့ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂံဟများကို […]
အင်တာနက်မှာခင်တဲ့ သူကို အပြင်မှာ သွားတွေ့လိုက်မိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုး
အင်တာနက် အွန်လိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို မီဒီယာတွေ အတော်များများက သတိပေးခဲ့ကြ ဖူးပါတယ်။မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မလုပ်သင့် မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်လာနိုင်စေဖို့အတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ တားမြစ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းမှာ သူစိမ်းတစ်ယောက်နှင့် စကားပြောတဲ့အခါ (chatting ထိုင်တာပေါ့)။အရှေ့အရှေ့တွေမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေလည်း များနေပြီမို့ အထူးတလည်သတိပေးစရာမလိုတော့ဖူးလို့ ထင်ပေမယ့်လည်း အခုလက်ရှိအထိ […]